“Messi waa kan ugu fiican adduunka waana inaan caawinaa isaga” Xiddig kooxda Barcelona ah – Gool FM
(Barcelona) 27 Okt 2020. Ciyaaryahanka khadka dhexe kooxda Barcelona ee Frenkie de Jong ayaa shaaca ka qaaday aragtidiisa ah in Lionel Messi uu yahay kan ugu fiican adduunka, ayna tahay inay ka faa’iideystaan ka garab ciyaaritaankiisa.
Frenkie de Jong ayaa tilmaamay in Messi uu garab istaag kaga baahan yahay saaxiibadiis, si uu u helo fursadaha ugu fiican uu gool ku dhalin karo, isagoo cadeeyay inuu mar kasta wax badali karo kooxda oo dhan.
Wargayska “Daily Mail” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Frenkie de Jong, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Marka uu Messi ku jiro kooxdaada, dabcan waxaad kooxdaada ku haysataa ciyaaryahanka aduunka ugu fiican”.
“Waxaad isku dayeysaa inaad ka dhigto booska ugu fiican ee uu isbedelka ku sameyn karo, waxaana u maleynayaa inaan u baahanahay anaga inaan la qabsano isaga”.
“Marka uu qabto kubadda wuxuu sameyn karaa Isbadel, wuxuuna taasi u sameynayaa xilli kasta adiga dartaa”.
Si kastaba ha noqotee, Messi ayaa shaaca ka qaaday rabitaankiisa ah inuu ka tago Barcelona kahor bilowga xilli ciyaareedkaan haatan socda, kahor inta aanan ugu dambeyntii lagu qasbin inuu sii joogo kooxda, sababa la xiriira heshiiska uu kula jiro Blaugrana.